Taageerayaasha Milan oo ku kala qaybsamay magacaabista Gattuso & Berlusconi oo aragtidiisa dhiibtey – Gool FM
(Milano) 27 Nof 2017 – Waxaa maanta is bedeley macallinkii kooxda AC Milan ee Vincenzo Montella oo ay saamaysay natiijo xumadii shalaytoole ka qabsatay garoonka San Siro oo ay 0-0 kula galeen Torino.
Waxaa haddaba lagu beddeley Gennaro Gattuso oo durbaba maanta la wareegey tababarka Rossoneri, waxaana arrintaa ku kala qaybsan taageerayaasha AC Milan oo ay qaybi qabto in laga faa’iidaysan karo kulayka iyo burjaawinimada raacihii rafka ahaa ee Milan.
Halka at jiraan taageerayaal xusuusan wixii qabsaday Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi iyo Cristian Brocchi, balse kuwa ku faraxsan imaanshiyaha Gattuso waxaa ka mid ah milkiilihii hore ee Silvio Berlusconi.
Raysal wasaarihii Talyaaniga ayaa Twitter kuso qoray: “Waxaan telefoonka ku la yeeshay wada hadal dheer oo kalgacal ku dheehan yahay dagaal yahankaygii Rino Gattuso. Nasiib wacan Rino! iyo dabcan Forza Milan! ”
— Silvio Berlusconi (@berlusconi) 27 november 2017
Sida cad marna ma wanaagsanayn xiriirka Berlusconi iyo Montella, isagoo weligiiba saluugsanaa xirfadda L’Aeroplanino oo uu la dhacsanaa Galliani oo gacantiisa midig ahaa.
Gunners oo 3 laacib oo muhim ah suuqa dhigaysa bisha Jannaayo